Ha aynu ku fahmi markii qof Israa'iil? | Apg29
Israa'iil waa lay soo celiyey sida quruun iyo Yuhuudda ku noqday dalkii soo ururay.
Haddaba aynaan mar dambe u baahan tahay inaad sugto Yuhuudda in ay dalkooda ka soo noqon doonaa, oo wuxuu noqday mid dhab ah 70 sano ka hor.
Ma aan fahmin waxa taasi ka dhigan tahay?
Haddii aan ma garan karo, waxaa loola jeedaa in aan la diidi doonaa waxgarashada ee hadalka nebiyadii. Waxay u muuqan kartaa riwaayado, laakiin waxa dhab ahaan lagu sheegi karaa jidka this.
Sidaas halkan waxaan uga jeednaa. Waxaa hadda dhacay ee 70 sano ee la soo dhaafay waxaa si cad u sii sheegay in kuwa Akhriya waxsii kitaabiga ah ka hor ayaa ogaaday in this dhici doona.
Halkan waxaan ku siin doonaa oo keliya tusaalooyin qaar ka mid ah daaciyiinta Masiixiyiinta ah ee waqtiga arkay hadalka nebiyadii.
In 1600s ah, ku noolaa John Owens, kuwaas oo ahaa hoggaamiyaha kaniisadda Ingiriisi iyo fiqi. Waxaa joogay oo aan wakhtigaas glimmer rajo ah in Yuhuudda oo laga yaabaa in ay dalka ku soo laabto. Iyadoo ay taasi jirto saadaaliyay John Owens soo socota:
"Yuhuuddu waa ka dhan qeybo ka mid ah dhulka halkaas oo ay ku firidhsan yihiin, oo wuxuu u soo celiyey dalkooda lagu soo ururiyey."
Protestant Qoraaga Paul Glegenhauver qoray in 1655: "soo laabtay A joogto ah oo Yuhuudda waxay dalkoodii weligaaba u yeellay by Ilaah marayo oo ballamo ku xad Ibraahim, iyo Isxaaq, iyo Yacquub."
Waxaan ka a boqol oo sano ka qaadan doonaa tusaalooyin qaar ka mid ah. August Hedström siiyey in 1912 la daabacay buug uu qoray Studies in waxsii sheegyada.
Waxa uu ku qoray: "Ugu dambeyntii, aragto in UTI Turkish Empire wakhtigaas u yeelan doonaan wadan ka madax-bannaan oo lacag la'aan ah, kuwaas State Yuhuudda, ama waxa loogu yeedhi doonaa."
Wasiirka ayaa Danish C. Skovgaard-Petersen qoray kitaabka Calaamadaha iyo jeer, waxaa la daabacay 1919th
In kitaabkan qoraaga siinayaa hadal in ka hor inta Ciise ayaa ku soo laabtay, si Yuhuudda ku soo laabtay dalkiisa noqon doonaa. Waxa uu qoray:
"Laakiin kiis kasta waa in la tixgeliyaa sida runta kitaabiga ah, in Israa'iil waa la soo ururiyey ee dalkooda iyo waa in vårbrytning ruuxa ah ka hor inta Rabbigu u imanayso. characters The ma rumoobin, Yuhuudda ayaa weli ma iman haysashada Palestine. "
Intaas waxaa sii dheer ku qoray Skovgaard-Petersen, "Sidaas daraaddeed waxaannu ku filan kartaa in Yuhuuddu waa in ay ka hor soo laabashada Ciise Masiix iyo soo laabto dalka."
Waa maxay waxa ay hadda si kastaba ha ahaatee soo socda ku dhow yahay in Ciise waqti kasta iman karo dib, sababtoo ah xaaladaha sheegid aasaasiga ah ayaa la oofiyey. Ma aan ogayn, oo waxay qaadan cawaaqibka waxaa ka mid ah?
Vecka 9, söndag 7 mars 2021 kl. 12:52